Dowlada Denmark oo ku dhawaaqday Xanibaado Cusub iyo Sharciyo dheeri ah
HomeWararka DenmarkDowlada Denmark oo ku dhawaaqday Xanibaado Cusub iyo Sharciyo dheeri ah
October 25, 2020 Wararka Denmark, Wararka Maanta Somaliska 0
Danmark ayaa si weyn u xakameyneysa dhaqdhaqaaqa bulshada iyada oo la adeegsanayo tallaabooyin cusub oo loogu talagalay in lagu xakameeyo isbedelka kiisaska sii kordhaya ee coronavirus ee waddanka Denmark.
Tallaabooyinka cusub waxaa ka mid ah:
Waajibka Marada waji xirarshada dhammaan goobaha dadweynaha ee gudaha wadanka
Mamnuucista iibinta khamriga wixii ka dambeeya 10-ka fiidnimo (oo ay ku jiraan dukaamada waaweyn iyo dukaamada kale)
Xadka isku imaatinka ayaa laga dhigi doonaa ugu badnaan 10 qof
Jadwalka waqtiga saddexdan tallaabo wuu kala duwan yahay: shuruuddaha wajiga waxay dhaqan gelaysaa laga bilaabo Oktoobar 29, halka mamnuucista iibinta qamriga ay dhaqan galayso laga bilaabo Isniinta soo socta. Labadan tallaabo ayaa sii jiraya illaa iyo bisha Janaayo 2deeda 2021, Raisal wasaaraha Denmark Frederiksen ayaa warbixinteeda ku sheegtay.
Isku imaatinka 10 Qof wuxuu dhaqan galayaa Isniinta wuxuuna sii jiri doonaa afarta asbuuc ee ugu horeysa.
Dhammaan xayiraadihii horay u jiray ayaa sidoo kale la kordhiyay illaa 2da Janaayo, Frederiksen ayaa sidaas sheegtay.
Waxaa loo qorsheeyay inay dhacaan Sharciyada qaar Oktoobar 29 Sida baararka, makhaayadaha iyo makhaayadaha lakin wali ayaa loo baahan doonaa inay xirnaadaan 10-ka fiidnimo isla markaana wajiga wejiga laga ilaaliyo ayaa qasab ku ahaan doona dhammaan gaadiidka dadweynaha.